‘एसिड पिडित साहको गुनासो महतोलाई मत दिएर गल्ती भो’ राजेन्द्र महतोले भेट्नै मानेनन् ! – खोज केन्द्र
» खोज रिपोर्ट » प्रदेश » राजनीति » समाचार » समाज अंक: 6732
‘एसिड पिडित साहको गुनासो महतोलाई मत दिएर गल्ती भो’ राजेन्द्र महतोले भेट्नै मानेनन् !
खोज केन्द्र शुक्रबार, फाल्गुण २१, २०७७ मा प्रकाशित
गत दीपावलीको दिन आरती साह जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका– ४ स्थित आफ्नो डेरा सरसफाइ गरिरहेकी थिइन् । साँझ तीन बर्षीया छोरीसँगै दीप जलाउने र मिठा परिकार खाने योजना थियो उनको ।
आफू गरिब भएका कारण नेताहरुले पनि बेवास्ता गरेको सुवोधको भनाइ छ । ‘समय परेपछि सहयोग गर्छ भन्ने सोंचेरै मैले पनि उहाँलाई भोट दिएको थिएँ’ उनले भने, ‘ढोगेरै समय मागे । दुई पटक समय दिनुभयो । तर एक पटक पनि भेट्नुभएन ।’